CCS Seminar: Umkhumbane (Cator Manor) ilokishi elithuthuka ngamandla kodwa elibhekene nezingqinamba ezahlukahlukene – University of KwaZulu-Natal
CCS Seminar: Umkhumbane (Cator Manor) ilokishi elithuthuka ngamandla kodwa elibhekene nezingqinamba ezahlukahlukene
Home » Events » CCS Seminar: Umkhumbane (Cator Manor) ilokishi elithuthuka ngamandla kodwa elibhekene nezingqinamba ezahlukahlukene
Izikhulumi: Fathi Ka Manzi and Thando Manzi
Indawo: CCS Seminar 6th floor Room 602, Memorial Tower Building,
UMkhumbane, ilokishi elincikene neTheku elalikhokhelwa intela abahlali ababesuka emakhaya bezofuna umsebenzi eThekwini eminyakeni eyikhulu nesigamu edlule. EMkhumbane kwakuhlala kuwo izinhlanga ezahlukene kodwa kwathi sekubusa ontamolukhuni bamaBhunu, izizwe zahlukaniswa – abomdabu baseNdiya bayiswa koChatsworth, abamaKhaladi eNewsland East, naseWentworth kwathi abampisholo bayiswa koMashu, Lamontville, Umlazi nakwezinye izindawo.
Sekufike uhulumeni wombuso wentando yeningi lomhlaba ubuyele ezandleni zabantu abahlali abaningi okungabasebenzi abaqhamuka ezindaweni zasemaphandleni KwaZulu naseMpumalanga Kapa kanti likhona neqoqo elivela koMozambique naseAngola. Lendawo iqale yaba imijondolo kwathi sekubusa uKhongolose yangena ngaphansi kohlelo lweEuropean Union ngokubambisana neRDP, kwakhiwa izindlu zomxhaso ezinamanzi nogesi, imigwaqo , izikole kanye nomtholampilo.
Kodwa akusho ukuthi iyindawo engenazinkinga, kulenkulumo uzozwa ukuthi abantu bakhona benza njani ukubhekana nezingqinamba ezinjegobugebengu,izidakamizwa, ukuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezakuvala izakhiwo ezifana neiSPCA, nokuthi isakhiwo esasizobasiza basichitha kanjani ngenxa yokuthi umasipala wayengaqalanga waxoxa nabo, ibio gass digester. Uzozwa ngesizinda samaphoyisa esidume njengesezinkabi kwaKito esesibulale cishe abantu abangaphezulu kwamashumi amahlanu.
Izikhulumi: Faith ka-Manzi uyintatheli kanye nombhali wezinkondlo oseneminyaka eyevile kweyishumi ehlala eMkhumbane . Uka-Manzi oqeda wazalelwa eThekwini eminyakeni engamashumi amane nesihlanu edlule, ngonyaka ka1999 watheswa ijazi leminyezane ezifundweni zesiNgisi kanye nezomlando esikhungweni semfundo esasaziwa ngeUniversity of Natal okumanje esesaziwa ngeUniveristy of KwaZulu-Natal. Uqale wacoshela izinhlangano zezindaba okubalwa iDaily News naloph aye novo lwakhe (iKeeping the Faith), iMail&Guardian, iSAPA, iBusiness Day, iSundayWorld, iSABC njalonjalo
Njengamanje uFaithka-Manzi uzinze eCentre for Civil Society, eUKZN lapho ebhala ngezimo ezimayelana nezenhlalakahle, ezomnotho ezombusazwe kanye nezemvelo ezibhekene nemiphakathi, abasebenzi kanye nabanhlwempu. Ubuye abhalele iphendandaba elisabalele umhlaba wonke elinabafundi abayisigidi iAfrica Report, imibhalo yakhe yaziwa ngeFaith’s Diaries, lapho ebhala khona ngokuthi ubhekana kanjani nezingqinamba zokuphila negciwane lengculazi.
UThandokuhle Manzi ungumfundi owenza unyaka wesithathu lapho egxile khona kwezokulawulwa kwezemvelo kanye nebalazwe, ezombusazwe kanye nezentuthuko esikhungweni semfundo ephakeme eUniversity of KwaZulu-Natal.